၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မိုးကုတ်မြို့သို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည် (၁၃၅) ဦး ၀င်ရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။
January (16), Nay Pyi Taw
The Ministry of Hotels and Tourism is currently establishing for comfort visit of international tourists in Myanmar in all several ways and tourists are continually visiting Myanmar to explore natural resources, tourist destinations, customs and traditions, lifestyles of different ethnic groups through not only by air, water but also from border gateways.
With the supervision of Ministry of Hotels and Tourism and the arrangement of KaungHein Shwe Sin International Co.,Ltd, the twotourists from Norway and Switzerland countrieswith their own (1) motorcar and (1) motorbikeentered Myanmar across Myawady Border Gate from 7th January2019 to 11th January 2019 , they traveled to Tamu-Gangaw-Bagan-Naypyitaw-kyaikhtiyoecities and then they returned back fromMyawadyborder gate to Thailandon January 11, 2019.
Because of the facts like Visa Exemption and the green season, the tourists are visiting increasingly to the famous destinations of Myanmar via the air, waterways and the border gates.
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံတကာမှခရီးသွားဧည့်သည်များ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောတောင်ရေမြေသဘာဝအလှအပများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များကို ကြည့်ရှုလေ့လာခံစားနိုင်ရန် လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းများဖြင့် သာမက နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း အပျော်စီး သင်္ဘောများဖြင့်လည်းကောင်း လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၏ကြီးကြပ်မှု၊ Golden Myanmar Butterfly Travels & Tours Co.,Ltd ၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဧည့်သည် (၁၅) ဦးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၃) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၀) ရက်နေ့အထိ မြန်မာရွှေလိပ်ပြာ (၂) အပျော်စီးရေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး-ဗန်းမော်-မိုးတား-ကသာ-တကောင်း-ကျောက်မြောင်း-စိန်ပန်းကုန်း-စစ်ကိုင်း-ရန္တပို-ပုဂံ-ရန်ကုန် ခရီးစဉ်များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းသဘာဝအလှအပရှုခင်းများ၊ ရေလုပ်သား တို့၏ လူနေမှု ဓလေ့စရိုက်နေထိုင်မှုပုံစံများ၊ ဆင်စခန်း၊ ရိုးရာအိုးလုပ်ငန်းနှင့် ညနေနေ၀င်ဆည်းဆာ အလှအပများအား ခံစားသိရှိလို၍ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်း စသည့်ခရီးစဉ်များကို ပိုမို တိုးတက်လည်ပတ် လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။